Yini ama-GIS futhi kubaluleke ngani? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ubuchwepheshe buthuthukise imininingwane ekhona kuyo yonke imikhakha yesayensi. Ngemuva kokuzalwa kwamakhompiyutha, uhlelo lokwaziswa lwabizwa ngeqoqo lamathuluzi wekhompyutha akwazi ukunikeza ulwazi nganoma yini ngezinhlelo zekhompyutha. Olunye lwalezi zinhlelo zolwazi ezisizile ukuthola idatha kusuka endaweni ebonakalayo yilezi I-SIG. Isichazamazwi sisho uhlelo lolwazi lokuma kwezwe futhi yilezo ezinikeza inani elikhulu lemininingwane mayelana nesikhala.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi yiziphi izici ze-GIS nokubaluleka kwabo namuhla.
1 Yini i-GIS
2 Amasampula nezinhlelo zolwazi
3 Ukubaluleka kokuma kwezwe ku-GIS
Luhlelo lolwazi oluqukethe inani elikhulu lemininingwane futhi elisebenza ngamathuluzi ekhompyutha abizwa nge-software. Into ethize efundwayo isikhala somzimba futhi ngenxa yalesi sizathu ibizwa ngokuthi uhlelo lokwaziswa kwendawo noma i-GIS. Kuyisoftware ethize evumela bonke abasebenzisi ukuthi babonisane ngokubambisana bafuna ukwethula kahle iqoqo lemininingwane yezwe ebhekisa endaweni ethile. Le yindlela yokuxhuma amamephu wedatha ongaba nayo imininingwane emikhulu mayelana nesikhala.
Lolu hlobo lwemephu lusiza ukubona ngeso lengqondo yonke idatha etholwe kusampula ukuze kukhombise futhi kuhlobanise zonke izehlakalo zokuma kwanoma yiluphi uhlobo. Lokho wukuthi, sithola i-GIS enenani elikhulu lemininingwane efana namamephu emigwaqo, iziza zezolimo, ukuminyana kwabantu, ukusatshalaliswa kohlaza, indawo yokuhlala yezinhlobo ezithile zezilwane, njll. Ngemininingwane etholwe ngokwenza izibonelo zalokho amabalazwe angenziwa ngezendlalelo zolwazi lapho yonke idatha izokhonjiswa khona.
Lokho wukuthi, singaba nemephu yendawo ethile esifuna ukuyifunda bese sengeza izingqimba zolwazi lokuma komhlaba ezitholakale ngokusampula. Lapho sesengeza ungqimba lwemininingwane ebalazweni lendawo, sithola uhlelo lokwaziswa ngokuma kwezwe. Singaba, ngokwesibonelo, indawo yokuhlala yezinhlobo nezinhlobo zayo ngokusebenzisa ingxube phakathi kwemephu yendawo kanye noqweqwe lolwazi.
I-GIS ikuvumela ukuthi ubuze futhi wethule imiphumela ezindaweni zewebhu nakumadivayisi eselula ngendlela esheshayo nenembile. Ngenxa yalezi zinhlelo zolwazi, inani elikhulu lezinkinga eziyinkimbinkimbi ezivela ekuhleleni nasekuphathweni kwensimu lingaxazululwa. Le ndlela elula lapho ulwazi lungavezwa khona yenze amasistimu olwazi lokuma kwezwe ukuthi abe ukwesekwa okubalulekile ekuthathweni kwezinqumo kumaphrojekthi ahlukene.
Amasampula nezinhlelo zolwazi
Kuyaziwa ukuthi namuhla sakha futhi sigcina imininingwane ngokuqhubekayo. Lolu lwazi luyanda futhi kungashiwo ukuthi yonke le datha ayikwazi ukugcinwa kumadivayisi njengoba yayinjalo phambilini. Abantu banesandla ekukhuleni kolwazi, kepha akubona bodwa. Phakathi kwemishini baphinde bakhiqize ukuxhumana okwakha inani elikhulu ledatha elibalulekile ekuphathweni. Isibonelo, kunezinzwa eziningi zedijithali ezifakwe ezitsheni zokunquma umzila osuthathiwe ngesikhathi sokulethwa kwephakeji. Lonke lolu lwazi luthunyelwa ezinkampanini zezokuthutha ukukhulisa ukulethwa nezindleko zezinkampani.
Okufanayo kuya ngolwazi lwendawo. Ukwahlukaniswa kolwazi kungasisiza ukuthi sibone ukuthi yini, kuphi futhi kungani izinto ezahlukahlukene zenzeka endaweni yethu. Ngenxa yokuma kwezwe nokwakheka komhlaba siyazazi izici ezahlukahlukene zobuso bomhlaba. Uma sihlanganisa lokho isayensi esinikeza khona nokugcwaliseka kwesampula nedatha ehlukile esinayo evela ohlelweni lolwazi, sakha i-GIS.
Izampuli zenziwa ngendlela ephindaphindayo futhi engaqondakali. Lokhu kusho ukuthi imininingwane itholwa kancane kancane kuze kuvele imininingwane emisha. Sizonikeza isibonelo ukuze siqonde kangcono amasampula asetshenziselwe ukuthola ungqimba lwemininingwane. Sicabanga ukuthi ufuna ukufunda ububanzi bezinhlobo zezinyamazane. Ukuze uthole lolu lwazi, kufanele uqale wenze isampuli. Kulesi sampula, kuzobalwa izindawo zokubona zezinhlobo zezinyamazane kanye nokuxhumanisa kwendawo lapho ibonwe khona kuzobonwa.
Isethi yazo zonke izixhumanisi ezikhona inquma ngendlela enembe kakhudlwana indawo yokwabiwa kwalezi zinhlobo. Isethi yalo lonke lolu lwazi igcinwa kusendlalelo solwazi. Kamuva, sifaka lolu hlu lolwazi ebalazweni lendawo esinalo lesifunda esithile. Ngale ndlela, sinendawo yonke yezwe lapho izinhlobo zezinyamazane zisatshalaliswa futhi singazazi izici zendawo yazo.
Ukubaluleka kokuma kwezwe ku-GIS
Uma sesihlaziye inani elikhulu lolwazi esinalo, siyabona ukuthi kunemininingwane eminingi kakhulu yokwenza. Isayensi ichaza umhlaba esihlala kuwo futhi kunolwazi oluthe xaxa ngalo. Lokhu kusho ukuthi kufanele sihlukanise imininingwane ngandlela thile. Ku-GIS sithola zonke izingxenye ezithile ezisisiza ukuba sikwazi thintana futhi uhlaziye kahle imininingwane yendawo.
Lolu lwazi lokuma kwezwe yilokho okunengxenye yendawo. Lokhu kungabuye kwenziwe kahle njengendawo yendawo kanye nemininingwane yokunikeza imininingwane eminingi ngemininingwane yento okukhulunywa ngayo. Esinye isibonelo ukuchaza nendoda emgwaqweni njengezixhumanisi zendawo.
Ukusetshenziswa kwe-GIS kusize kakhulu ukubonwa kwedatha etholwe ebalazweni. Namuhla i-GIS isetshenziselwa cishe noma iyiphi iphrojekthi kanye nokufunwa kolwazi lwezindawo. Kusukela ezinkampanini zezokuthutha kuya ekuhloleni umthelela wezemvelo, i-GIS isiphenduke ithuluzi elibalulekile.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi nge-GIS nokubaluleka kwayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » I-GIS (Izinhlelo Zolwazi Lwezindawo)